Nke a bụ ihe ọhụrụ Samsung Gear Fit 2 | Akụkọ akụrụngwa
Ọ bụrụ na ụnyaahụ anyị maara site n'aka Xiaomi ndị Mi Band 2Mgbe ndị China na-ewu ewu na-ewu ewu gosipụtara ya taa, taa ọ bụ ntụgharị Gear Fit 2 sitere na Samsung nke ewepụtara ụnyaahụ na ihe mere na New York. Na 2014 mmalite nke ụdị mbụ nke Gear Fit mere, nke kpalitere nnukwu ihe ịga nke ọma na ikekwe anyị nwedịrị ike ịsị na ọ ka nwere, mana mmeghari ahụ nke arụ ọrụ ahụ na-atụle quantifying mgbaaka dị mkpa.
Na anyị nwere ike isi na mbu kwuo na Samsung emeela ya, ma o meela nke ọma. Ihe mbụ na - egosi na ngwaọrụ bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na ihuenyo, Super AMOLED nke 1.53 inch curved. Nhazi ya na agba ya mara mma bụ ihe ndị ọzọ ndị ọrụ ọ bụla na-agaghị ahụ.
2 Ndi mmeghari ohuru di nkpa na nke a Gear Fit 2?
Ọzọ anyị ga-enyocha ihe isi atụmatụ na nkọwa nke Samsung Gear Fit 2;
Ibu nke naanị gram 30
1,53-inch Super AMOLED ihuenyo na mkpebi nke 432 x 216 pikselụ
Dual-core Exynos processor na-agba ọsọ na 1 GHz ọsọ
4 GB nke nchekwa dị n'ime iji chekwaa egwu ma ọ bụ akwụkwọ ọ bụla ọzọ
200 mAh batrị nwere obodo kwụụrụ onwe ya dịka Samsung n’onwe ya si dị n’etiti ụbọchị atọ na ụbọchị anọ
Ihe akaebe IP68 nke na-eme ka o sie ike na mmiri na uzuzu
A na-enweta ya na nha abụọ dị iche iche, L na S nke ga-emezigharị n'ụzọ zuru oke ma n'ọnọdụ abụọ na nkwojiaka gị
Dị na atọ dị iche iche na agba; nwa, acha anụnụ anụnụ na-acha odo odo
Ekwesiri ighota na ihe ohuru Samsung a gha enyere anyi aka idekọ ihe omuma nile anyi na aru n’ime ubochi nile, na-adabere na ufodu oru ya dika nkpu obi ma obu GPS di omimi.
N'ezie, anyị nwekwara ike ịlele amamọkwa anyị natara na ekwentị mkpanaka anyị n'ụzọ dị mfe naanị site na ịmekọrịta Gear Fit 2.
Ndi mmeghari ohuru di nkpa na nke a Gear Fit 2?
Ọ bụ ogologo oge kemgbe Samsung gosipụtara n'ihu Gear Fit na ụdị nke abụọ nke ngwaọrụ a dị ezigbo mkpa, mgbe enwere nnukwu ụdị nke mbụ. Ka o sina dị na nke a Gear Fit 2 anyị anaghị ahụ ọtụtụ ndozi. Na mgbakwunye, ọnụahịa ya, nke ga-agarịrị karịa euro 200, agaghị enyere ndị ọrụ aka ịhọrọ oke mgbaaka ọhụrụ a.
Ọganihu n'ime imewe ahụ, ihuenyo ọhụụ ga-enye anyị oke mma yana mwekota nke GPS anyị nwere ike ịsị na ha bụ isi ndozi etinyere, nke m edoghị anya ma ọ bụrụ na ha ga-ezuru. Returnlaghachi na ọnụahịa ahụ, maka ego nke euro anyị ga-akwụ ụgwọ anyị nwere ike, dịka ọmụmaatụ, zụta ụfọdụ smartwatch ọzọ nke ga-enye anyị ohere karịa nke a Gear Fit yana dịka ọmụmaatụ 10 Xiaomi Mi Band 2, nke anaghị nwere otu imewe, mana na-enye anyị ihe dịka otu nhọrọ na arụmọrụ.
Obi abụọ adịghị ya na Samsung Gear Fit 2 a bụ ngwaọrụ pụtara ìhè, jiri nlezianya mee ihe ruo na njedebe ikpeazụ, mana nke a ga-akwụ ụgwọ dị oke oke maka nhọrọ na ọrụ ọ ga-enye anyị. N'ezie, ọ dịghị onye nwere obi abụọ na ahịa ahụ ga-abụ ihe a nabatara na nke ahụ bụ na enwere ọtụtụ ndị ọrụ ndị ụdị ngwaọrụ a na-adọta ọtụtụ elebara anya ma dị njikere ịkwụ ụgwọ maka ọnụahịa ha nwere.
Nyaahụ Samsung kwupụtara na mmemme ngosi na Ihe kacha ọhụrụ Gear Fit 2 ga-adị na ahịa ahụ site na June 10Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ South Korea ekwupụtaghị mba ọ ga-adị. Anyị na-eche na n'ime ụbọchị ole na ole sochirinụ, ọ ga-eme ka mba ndị nwere ike nweta ya mara ọkwa, n'etiti nke anyị nwere olile anya na Spain nọ.
Maka ọnụahịa ahụ, ụnyaahụ ka akwadoghị ya, ikekwe ka ị ghara ịtụ onye ọ bụla ụjọ. Ọ bụrụ na anyị lelee afọ 2014 mgbe mbido mbụ Gear Fit, ọnụahịa ya bụ euro 200, yabụ ịhụ mmezi na atụmatụ ọhụrụ etinyere na nke abụọ a A ga-eche n'echiche na anyị agaghị ahụ ọnụahịa dị ala karịa 200 euro.
N'ikpeazụ na n'ihe gbasara ndakọrịta anyị nwere ike ịgwa gị na nke a wearable ga-arụ ọrụ n'ụzọ zuru oke na ngwaọrụ ndị ahụ niile nwere gam akporo 4.4 ma ọ bụ karịa, yabụ na ụkpụrụ ekwesịghị inwe oke nsogbu maka ya ka ọ rụọ ọrụ n'ọtụtụ imerime ngwaọrụ ebe ahụ. ugbu a n'ahịa.
Gịnị ka i chere nke ọhụrụ a Samsung Gear Fit 2 na price na nke ọ ga-kụrụ ahịa?. Gwa anyi na oghere edebere maka ikwu okwu na post a ma obu site na netwọkụ ndi mmadu ebe anyi no ma choo inu okwu gi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Nke a bụ ihe ọhụrụ Samsung Gear Fit 2